Hindisaha Mawduuca Hindiya Booqashada Meelaha Xiisaha leh Lahaanshaha Safarrada Mawduuca
Hindiya waxay ku hadashaa "Unity in Diversity" oo leh xaalad dabacsan, xiliyada, dhaxalka, dareenka, dhaqanka, lahjadaha iyo luqadaha, heshiisyada, caadooyinka, diinta, cunnooyinka, qoob ka ciyaarka, muusikada, muuqaalka shakhsiga iyo wixii la mid ah. Isku-dhafka waxaa lagu arki karaa gumeysi kasta iyo geeska qaranka, taas oo si wadajir ah u sharxi kartid kartida hal-abuurka ee socdaalka ee qaybaha kala duwan ee meeraha. Hindisaha mawduucyada India ayaa siinaya fursad gaar ah oo ay ku soo booqdaan Hindiya oo dhadhanka labadaba dhadhanka - Hindiya qaabkeeda caadiga ah ee caadiga ah iyo Hindiya ee qaabkeeda kore.
Iyadoo sahaminta munaasabadaha safarka Hindiya waxay u baahan yihiin inay muujiyaan xiiseeyntooda duleedyada gaarka ah ee ay bixiyaan SandPebbles. Haddii aad tahay qof jacayl ah, waxaad aadi kartaa wadada hurdada ama waqooyiga, iyo haddii aad xeebahaaga jeclaan lahayd, markaa qaybta koonfureed iyo galbeed ee waddankan ayaa kugu sugaya. Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa fursado cajiib ah oo aad ku bixin karto ciidaha fasaxa gudaha Hindiya ama booqashooyin qoys. Haddii aad rabto in aad ku bixiso fasax xagaaga, ka dibna ma jirto meel ka fiican oo ah rugta hagaagsan iyo cagaaran ee Hindiya, iyo haddii aad tahay dabeecad ama duurjoogta, waxaad raadin kartaa baakadaha dalxiiska ee mawduucyada ee ka soo jeeda beeraha qaranka iyo goobaha duurjoogta . Iyo wax ka sarreeya haddii aad rabto inaad sahamiso waxyaabo ka duwan markaa dalabyo ayaa soo socda oo loogu talagalay booqashada Monsoon, riwaayadaha qabiilka, booqashada booqashada wareegyada Buddhist iyo waxyaabo kale oo badan. Mawduucyadani waxay sidoo kale ka caawiyaan diyaarinta booqashadooda fasaxa waxayna saameyn ku yeelanayaan si ay u sahamiyaan midabada Hindiya habka ugu fiican!
Bandhigyada Bandhiga gaarka ah ee Monsoon
Summer Hill Station Hindiya
Duurjoogta duurjoogta Eco Tours India
Hindiya Buddhist Tours
Hindisaha Toddobaadka Hindida ah ee Gateways
Hindi Honeymoon Tours